Dhismo isku ruqsaamay ee faras magaalaha Istockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Tomas Fransson (Lyssnarbild)
Dhismo isku ruqsaamay ee faras magaalaha Istockholm
La daabacay torsdag 18 april 2013 kl 10.05
Dhismo ku yaala waddada Artilerigatan ee faras-magaalaha Istockholm ayaa isku burburay galabnimadii maalinttii arbacadii, balse aanay nasiib wanaag cidina ku dhaawacmin, sida ay hayadda ammaanku sheegtay, sida ay qortay idaacadda wararka Iswiidhen ee TT.
Qeeyla-dhaantii ugu horeeysay ayaa soo gaartay boliiska saacaddu kolkay ahayd 16:27, iyada oo dabadeed ey jireen xiriirro dhanka telefoonnada ah. Dhismahan ayaa waddada ku soo dhacay isagoona ku habsaday lix baabuur ee dhabbada ku sugnaa.
Wararka ayaa sidoo kale waxey sheegeyaan in dhismaha burburay uu dhaawac u geeystay qeeybo ka mid ah daar dhnicadeeda ahayd. Illaa iyo hadda ma cada sababta ka dambeeysay in dhismahani burburo, iyadoona dacwad laga oogay xaaladdan.